0 Thursday April 23, 2020 - 18:45:22
0 Tuesday April 21, 2020 - 16:30:59
Faah Faahin: Gaadiid Xamuul ah oo ciidamada Itoobiya looga gubay gobolka Baay.
0 Monday April 20, 2020 - 13:47:38
Sida ay wararku sheegayaan khasaara xooggan ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya kasoo gaaray weeraro culus oo shalay lagula beegsaday deegaanno katirsan gobolka Bay ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Diraasad: Corona Kadib Gabdhaha Muslimaadka Waxaa U Badbaaday Xijaabkooda!
0 Tuesday April 14, 2020 - 12:10:47
Dirsaasad dhawaan laga sameeyey wadamada Reer galbeedka ayaa muujisay in haweenka Muslimaadka ee xijaaban ay ka badbaadeen dhibaatooyin ay marki hore kala kulmayeen dadka ay ku dhex noolyihiin ee aan heysan diinta Islaamka, tan iyo wixii ka dambeeyay markii Coronavirus ka dillaacay caalamka gaar ahaan…
0 Sunday April 12, 2020 - 11:03:53
Maamulka isku magacaabay Puntland ayaa markale soo saaray digniin ku saabsan in dib loo dhigo doorashooyinka madaxtinimada dowladda Federaalka.
0 Wednesday April 08, 2020 - 10:35:23
Dowladda Federaalka ah oo mar marsiiyo ka dhiganeysa cudurka karoona eee sida degdegga ah ku faafa ayaa xirtay dugsiyada qur'aanka kariimka ah ee ku yaalla magaalada muqdisho.
0 Wednesday April 08, 2020 - 10:24:34
0 Tuesday April 07, 2020 - 12:01:59
0 Saturday April 04, 2020 - 11:54:51
Waxa beryahan ay Khayre iyo xukuumaddiisu ay warbaahinta ka sheegayeen in Soomaaliya deyntii lagu lahaa laga bixiyey. Hadda waa sidee qaabka deynta loo cafiyey iyo qaabka ay Khayre iyo xukuumaddiisu ay warbaahinta uga sheegeen? Soomaaliya waxa lagu lahaa deyn dhan 2.4 bilyan oo doollarka Maraykanka…
0 Monday March 30, 2020 - 09:27:02
Maamulka isku magacaabay 'Hirshabelle' ayaa markale guddoomiye u magacaabay gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Saturday March 28, 2020 - 07:21:34
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qaraxyo shalay oo Jimco aheyd lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM xilli ay marayeen wadada laamiga xaafadda Suuqa Xoolaha ee degmada Heliwaa.
0 Thursday March 26, 2020 - 10:27:43
0 Monday March 16, 2020 - 12:29:53
Qaar kamid ah dowladaha dhaca bariga qaaradda Afrika ayaa ku dhawaaqay in ay qaadayaan tallaabooyin looga feejignaanayo faafidda cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
0 Sunday March 15, 2020 - 10:41:42
« Prev12345678 ... 44Next »